DEG DEG:- Sheekh Maxamed Shaakir oo goordhaw soo gaaray magaalada Muqdisho - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Sheekh Maxamed Shaakir oo goordhaw soo gaaray magaalada Muqdisho
Wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ee gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir ayaa goordhaw soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Sheekh Maxamed Shaakir oo saakay kasoo amba baxay magaalada Guriceel ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka trisan dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana haatan loo galbiyay hoolka martida ee garoonka.
Madaxweynaha Ahlu-sunna ee gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir ayaa la sheegayaa in safarkiisa magaalada Muqdisho uu yahay si uu uga qeyb-galo xafladda maalinta berri lagu caleemo saarayo madaxweyneha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Maamuka Ahlu-sunna Waljameeca oo haatan ka taliso qeybo ka mid ah gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeeday dowladii uu madaxweynaha ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna xilligaasi diideen inay ku biiraan maamulka Galmudug, balse waxaa haatan muuqata inay niyad wanaag u muujiyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Xafladda caleemo saarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo oo berri ka dhici doonta magaalada Muqdisho ayaa la filayaa inay kasoo qeyb-galaan madax badan oo gudaha iyo dibadda ka imaanaya, kuwaas xilliyadda soo socdo soo gaari doonna magaalada.
Waa markii ugu horeeysay madaxweyne ka tirsan maamulka Ahlu-sunna Waljameeca ee gobolada dhexe uu safar ugu yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, waxayna talaabadaan muujineysa ififaalo nabadeed oo ka dhalata dalka Soomaaliya.